မာကု 10: 13-16 ကျမ်းစာအားသုံးသပ်ခြင်းနှင့် Commentary
ယရှေုသညျကောင်းကြီးမင်္ဂလာ Little ကကလေးများ (မာကု 10: 13-16)
analysis နှင့် Commentary
13 ထိုသူတို့ကသူတို့ကိုမထိသင့်ကြောင်း, သူ့ကိုမှကလေးငယျမြားကိုဆောင် ခဲ့. , တပညျ့တျောတို့ကသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့သောသူတို့အားဆုံးမတော်မူ။ 14 ယရှေုသညျမွငျသောအခါဒါပေမယ့်သူကအများကြီးညှိုးခဲ့, နှင့်သူငယ်ကိုငါ့ထံသို့လာရန်သည်းခံပါ, သူတို့မမြစ်တားကြဟုမိန့်တော်မူ၏: ထိုကဲ့သို့သော၏အဘို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဖြစ်ပါတယ်။ 15 ဧကန်စင်စစ်ငါသူငယ်အဖြစ်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့မခံမယူသောသူမည်သည်ကား, သူမြို့သားမဝင်နိုင်လိမ့်မည်ဆိုသညျကား။ 16 ထိုမင်းသည်သူတို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်လျက်, သူ့လက်မောင်းမှာသူတို့ကိုချီလျက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သူတို့အား။
နှိုငျးယှဉျ: မဿဲ 19: 13-15; လုကာ 18: 15-17
၏ခေတ်သစ်ပုံရိပ် သညျယရှေု လေ့သူ့ကိုမဿဲနှင့်လုကာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲ, ကလေးများနှင့်ဤအထူးသဖြင့်မြင်ကွင်းနှင့်အတူထိုင်လျက်ထားပါတယ်, အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကခရစ်ယာန်တွေကိုယရှေုသညျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်၏ကလေးများနှင့်အတူအထူးဆကျဆံရေးရှိပါတယ်ခံစားရတယ်။
အစောပိုင်းကကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူတသမတ်တည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ - ဒါဟာယေရှုရဲ့စကားထပ်မံမဟုတ်ဘဲအာဏာကိုရှာကြံထက်ခိုးမရှိဘူးမှလက်ခံစေခြင်းငှါမိမိနောက်လိုက်အားပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်ဟုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာခရစ်ယာန်များသည်များသောအားဖြင့်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြပြီးကိုယ့်အပြစ်မဲ့နှင့်လုံးလုံးလြားလြားယုံကွညျခွငျးကိုခြီးမှမျးအဖြစ်ဒီအစဉ်အလာစာဖတ်ခြင်းငါ့သဘောထားမှတ်ချက်အကျဉ်းချထားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသို့သော်မဟုတ်ပါဘူး။
န့်အသတ်ယုံကြည်မှုကယ့်ကိုအားပေးသငျ့သလော ဤကျမ်းပိုဒ်ယရှေုသညျရိုးရှင်းစွာသူတို့ကလေးတစ်ဦးအဖြစ် "ကိုလက်ခံရရှိ" မဟုတ်လျှင်အဘယ်သူမျှမဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကြေညာခြင်းဖြင့်ကလေးငယ်များအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ childlike ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဒါပေမယ့်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်မထားဘူး - အရှိဆုံးဓမ်မပညာရှငျမြားမှဖတ်ပြီးပါပြီတစ်ခုခု မိုဃ်းကောင်းကင်ကရိုက်ထည့်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အားကလေးတစ်ဦး၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုရှိရမည်ဟုဆိုလို။
တဦးတည်းကပြဿနာအများစုကိုကလေးများသဘာဝစပ်စုနှင့်သံသယဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချဖို့နာမယူဘဲနေစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအစဉ်မပြတ် "ဘာဖြစ်လို့" မေးမြန်းဖို့ကျရောက်နေတဲ့များမှာ - အကြောင်း, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူတို့ကိုသင်ယူဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသဘာဝကသံသယအမှန်တကယ်ပင်မျက်စိကန်းယုံကြည်ခြင်း၏မျက်နှာသာအတွက်စိတ်ဓာတ်သငျ့သလော
လူကြီးများအတွက်တောင်မှအထွေထွေယုံကြည်မှုဖြစ်ကောင်းမှားနေသည်။ ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်မိဘများသူစိမ်း၏ယုံကြည်မှုများဖြစ်သူတို့သားသမီးသင်ပေးဖို့သင်ယူဖို့ခဲ့ကြ - သူတို့ကိုပြောနေတာမဟုတ်သူတို့နှင့်အတူချွတ်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးများသဖြင့်လူသိများကြသူတောင်မှလူကြီးများကသူတို့အခွင့်အာဏာအလွဲသုံးစားနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဆက်ဆက်မှကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်သောအခွအေနေကသူတို့စောင့်ရှောက်မှုသို့အပ်နှင်းသည့်ကလေးငယ်များထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ယုံကွညျခွငျးနှငျ့ Trust ၏အခန်းကဏ္ဍ
သံသယများနှင့်သံသယကအဆီးအတားနေစဉ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှု, ကောင်းကင်ဘုံဝင်များအတွက်လိုအပ်သောရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ကောငျးကငျဘို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏တန်ဖိုးရှိပန်းတိုင်တစ်ခုမဖြစ်စေခြင်းငှါပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ သံသယများနှင့်သံသယကိုတက်ပေးခြင်းကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးမှတစ်ဦးနှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူများ, ပြင်းထန်စွာထင်သူတို့ပြောသည်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသံသယများနှင့်တစ်ဦးသံသယမျက်စိနဲ့တောင်းဆိုမှုများဆနျးစစျဖို့အားပေးရပါမည်။ သူတို့ကမေးခွန်းထုတ်စွန့်ခွာဖို့ဒါမှမဟုတ်သံသယအပေါ်အရှုံးမပေးမှပြောသည်ဖို့မဖြစ်သင့်ပါတယ်။
မဆို ဘာသာတရားကို unskeptical ဖြစ်ရန်၎င်း၏နောက်လိုက်လိုအပ်ပါတယ်ရာအလွန်မှတ်ခံရနိုငျသောဘာသာတရားမဟုတ်ပါဘူး။ ကလူကမ်းလှမ်းရန်အပြုသဘောနှင့်ကျိုးနပ်တစ်ခုခုရှိပြီးဖြစ်သောတစ်ဦးကဘာသာရေးကိုသံသယဝါဒီများ၏စိန်ခေါ်မှုများသံသယများနှင့်တွေ့ဆုံရန်မှတက်မတ်တပ်ရပ်နိုင်မယ့်ဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်။ မေးမြန်း့တားရန်ဘာသာတရားများအတွက်ဖုံးကွယ်ဖို့တစ်ခုခုရှိကွောငျးဝန်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ယရှေုသညျဒီမှာကလေးတွေပေးသည်သော "ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ" ကိုကြောင့်ဖြစ်ကောင်းပကတိလမ်းအတွက်ရိုးရှင်းစွာကိုဖတ်မရသင့်ပါတယ်။
ဓမ်မဟောငျးကမျြးရှည်သညျဘုရားသခငျကျိန်ဆဲ၏စံချိန်နှင့် "ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ" ယုဒလူတို့တစ်သာယာဝပြောတဲ့, တည်ငြိမ်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးမည့်လမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဣသရေလလူမျိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဒီမြင်ကွင်းထက်ပိုမိုဣသရေလအမျိုးအပေါ်သို့သက်ညျဘုရားသခငျ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှတစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်အဓိပ်ပာခဲ့သညျ - ယခုမူကား, ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလုပ်နေတယ်သာယုံကြည်ချက်တွေနဲ့သဘောထားတွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အချို့သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသောသူတို့အား။ ဒါကရှေးခယျြပြည်သူ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းတို့အပေါ်မှာအဓိကအား predicated ခဲ့ပြီးသောအစောပိုင်းကဘုရားသခငျ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှသည်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။
မုနျ့ငါးလုံးနှငျ့ငါး (မာကု 6: 30-44) ယရှေုသညျငါးထောငျ Feeds
အဆိုပါ Nicene Creed
အဆီအဓိပ္ပာယ် - ဓာတုဗေဒဝေါဟာရ
SUNY သို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
သင်ကဒီပလိုမာ Mills ကအကြောင်းသိလိုကဘာလဲ
စိန့် Andrews ကရုပ်ပုံများမှာဟောငျးသင်တန်းအမှတ်စဥ်
ဠာဆိုင်ရာ constant ကဘာလဲ?
အဆိုပါ Surrency သရဲခြောက်သော
မန်ကျည်း - တစ် Noxious အနောက်တိုင်းသစ်ပင်
စုဆောင်း GI Joe လှုပ်ရှားမှုကိန်းဂဏန်းများ
ထိပ်တန်းလစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
အီသနော Molecular ဖော်မြူလာနှင့်လက်တွေ့ဖော်မြူလာ
Collections Coca-Cola က Cookie အိုး
Chevrolet ကား 2016 Corvette သည်နယူးဒီဇိုင်းအထုပ်များကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
နှစ်ဆယ်တစ်ခုမှာလေယာဉ်မှူး - "အထဲကအလေးပေး"
ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် Irlen Syndrome ၏ဖျေါပွခကျြ